Mi 5c ဝယ်ယူဖို့ရန်အားခဲထားကြတဲ့ Users များအတွက် Network ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးချက် | Than Dana
Home » News » Mi 5c ဝယ်ယူဖို့ရန်အားခဲထားကြတဲ့ Users များအတွက် Network ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးချက်
Mi 5c ဝယ်ယူဖို့ရန်အားခဲထားကြတဲ့ Users များအတွက် Network ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးချက်
In News On March 5, 2017
Xiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Processor အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Mi 5c ကို မကြာခင်ကပဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်မှာရောင်းချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ရောင်းချတဲ့အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ရောင်းအားအတော်လေးကောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခင်မှာ တရုတ်ပြည်ဘက်က 3rd Party Suppliers တွေအနေနဲ့ အခြားသောနိုင်ငံတွေကို မကြာခင်တင်ပို့ရောင်းချကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်း Mi 5c နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး မဝယ်ခင်မှာကြိုတင်သိရှိထားရမည့် အရေးကြီးတဲ့အချက်တခုကိုအသိပေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြည်ပ Suppliers တွေအနေနဲ့ ၎င်း Mi 5c မှာ Network ပိုင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တရုတ်ပြည်ပြင်ပ အခြားနိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုနေကြတဲ့ Mobile Network တွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။ အဓိကပြဿနာကတော့ တရုတ်ပြည်ပြင်ပအခြားနိုင်ငံတွေမှာ လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ Mobile Network တွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး 3G/ 4G Network တွေဟာ ၎င်း Mi 5c မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စျေးကြီးပေးဝယ်ပြီး 3G/ 4G Mobile Network အသုံးပြုလို့မရပဲ 2G Network သာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ WiFi Phone တလုံးကိုလည်း ကျနော်တို့ Users တွေအသုံးပြုချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
Mi 5c ဟာ ဘယ် Network စနစ်တွေမှာအလုပ်လုပ်မှာလဲ ?
Xiaomi ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Processor အသုံးပြုထားတဲ့ Mi 5c ဟာ တရုတ်ပြည်တွင်း Network စနစ်တို့ရဲ့ TD-LTE စနစ်ကိုသာတပ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် တရုတ်ပြည်တွင်း Network တွေမှာပဲ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံအများစုဟာ FDD-LTE စနစ်ကိုသာအသုံးပြုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် Mi 5c ဟာ FDD-LTE စနစ်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်လို့ Xiaomi အနေနဲ့ ၎င်း Mi 5c ကို China UNICOM FDD-LTE Network စနစ် (သို့မဟုတ်) B1 ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ TDD-LTE စနစ်အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ Version ထပ်မံထုတ်လုပ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့တရုတ်ပြည်ပြင်ပနိုင်ငံများက Users များအတွက်ကတော့ ၎င်း Mi 5c ဟာ အိပ်မက်တခုသာဖြစ်နေမှာပါ။
Mi 5c ဟာ မည်သည့် Network စနစ်မှာသာအလုပ်လုပ်မှာလဲ ?
Mi 5c ဟာ တရုတ်ပြည်ပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် 2G Network စနစ်ကိုသာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ တရုတ်ပြည်ပြင်ပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ 3G/ 3G+/ 4G စနစ်တွေကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ LTE 4G Network နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုတာက အခုလက်ရှိမှာ B1 ဖြစ်ပါတယ်။ Mi 5c ရဲ့ TDD LTE Supported က B3 နဲ့ B4 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် 4G Network လည်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ 3G Network ပိုင်းမှာလည်း Mi 5c Supported ဖြစ်တာက TD-SCDMA စနစ်ဖြစ်ပြီး B3 တမျိုးတည်းသာ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒါကလည်း တရုတ်ပြည်တွင်းမှာသာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာက WCDMA စနစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်း စနစ်အတွက် B1 နဲ့ B8 သာအသုံးပြုတဲ့အတွက် 3G/ 3G+ စနစ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
( ဒါကြောင့် Xiaomi ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Processor ဖြစ်တဲ့ Surge S1 SoC အသုံးပြုထားတဲ့ ပထမဦးဆုံးဖုန်းတလုံးဖြစ်တဲ့ Mi 5c ကို ဝယ်ယူဖို့အားခဲထားကြတဲ့ Users များအနေနဲ့ သတိပြုဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ )
Topics: General Knowledge Mi 5c News Pinecone Surge S1 Xiaomi
Previous Post FM Radio ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ် Walkie-Talkie ကို Xiaomi မိတ်ဆက်
Next Post Qualcomm’s Snapdragon 435 အသုံးပြုထားသော Redmi 4X ကို တရုတ်ပြည်တွင် စတင်မိတ်ဆက်